Xog: Farmaajo oo go'aan lama filaan ah ka qaatay baratakoolkiisa gaarka ah - Caasimada Online
Home Warar Xog: Farmaajo oo go’aan lama filaan ah ka qaatay baratakoolkiisa gaarka ah
Xog: Farmaajo oo go’aan lama filaan ah ka qaatay baratakoolkiisa gaarka ah
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo ayaa ugu danbeyntii qaatay go’aan ah in Bartakoolkiisa gaarka ah uu ka dhigo shaqsiyaadkii la shaqeyn jiray Madaxweynihii hore ee Somalia Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuusan la imaan wax Bartakool ah kadib markii lagu dhaliilay in Bartakoolka cusub ay khaldayaan nidaamka maadaama aysan aqoon sharciyada lagu hagaayo Madaxweynaha.
Bartakoolka iminka la shaqeeya Madaxweynaha ayaa la xaqiijiyay inay yihiin kuwii la shaqeyn jaray Xasan Sheekh waxaana soo baxaaya warar sheegaya in Tababar dibadda ah loo qaaday dhowr qof uu Farmaajo u keensaday inay buuxiyaan booska kuwa iminka ku shaqeeya Bartakoolka.
Bartakoolka hadda la shaqeeya Farmaajo ayaa ka haray dhowr Bartakool oo la baxay Xasan Sheekh kuwaa oo ku heeb ahaa Madaxweynihii hore.
Bartakoolka sida KMG ah ula sii shaqeyn doona Farmaajo ayaa Seddex sanno ka hor Tababar lagu siiyay dalal ay kamid yihiin Turkiga iyo Imaaraadka, waxaana la filayaa in kuwaani lagu bedeli doono tirada uu la imaaday Farmaajo ee loo qaaday Tababarka.
Farmaajo ayaa kala diri doona dhammaan Shaqsiyaadka sida dhow ula shaqeyn jiray Xasan Sheekh waxaana la xaqiijiyay in kala diristaasi ay imaan doonto kadib markii lagu dhawaaqo Golaha Wasiirada Xukuumada Somalia.
Ma cadda baahida keentay in Madaxweyne waliba oo la wareega xilka kala diris ku sameeya dhaqaalaha ka howlgala Villa Somalia, waxa ayna tani dhaqan iyo caado u noqotay Madaxda Soomaalida.